Sawiro+Video:Kulan looga hadlayey ka faa’iideysiga Kheyraadka dalka oo Muqdisho lagu qabtay – Gedo Times
class="post-template-default single single-post postid-41767 single-format-standard">
Home / Wararka Maanta / Sawiro+Video:Kulan looga hadlayey ka faa’iideysiga Kheyraadka dalka oo Muqdisho lagu qabtay
Sawiro+Video:Kulan looga hadlayey ka faa’iideysiga Kheyraadka dalka oo Muqdisho lagu qabtay
Updated: 11th July 2018
Kulan looga hadlyay ka faa’iideysiga kheyraadka dalka sida shidaalka iyo macdanta, ayaa maanta lagu qabtay Magaaladda Muqdisho, waxaana goob joog ka ahaa Wasiirka ,Wasiir ku xiggeenka Batroolka iyo Macdanta Soomaaliya iyo Wafdi ka socday Dowladda Norway.
Kulanka oo ku saabsanaa boggaadin ay wafdi ka socda Norway u wadeen Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta Soomaaliya oo ahayd wajiga labaad ee qorshaha diyaarinta kharyaadka shdiaalka iyo Macdanta ay u gudubtay wasaarada ayaa siinayo dalka awoodo qeexeysa taageerada caalamiga ah.
Madaxda Wasaaradda, ayaa kaga mahad celiyay dowladda Norway boggaadinteeda iyo taageerada ay u muujinayso Soomaaliya, Waxaana dowladda Norway ay sheegeen in ay diyaar u yahiin in caawinaad wanaagsan ay la garab istaagayaan Soomaaliya.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta Xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulqaadir Hilaal, ayaa kulanka ka dib u sharaxay warbaahinta Qaranka , ayaa sheegay in ka faa’iideysiga Kheyraadka dalka ahmiyad ballaaran ay u leedahay dalka.
“Waxaan u gudubnay wajiga labaad ee qorsheynta ka faa’iideysiga khayraadka, taasoo ahmiyad wayn u leh dalka, waxaan wadnaa diyaarinta istaraatiijiyada wajigan cusub si loogaaro ka faa”iideysiga kharyaadka dalka” ayuu yiri Mudane Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal.
← Previous Story Daawo:Baarlamaanka Kenya oo loo gudbiyay codsi ah in Ciidamadda Kenya laga saaro Soomaaliya
Next Story → Wasiirka Difaaca Soomaliya iyo mas’uuliyiin kale oo kormeerey Xerada Janaraal Dhaga-badan